GNOME CIRCLE: Codsiyada iyo Maktabadaha Mashruuca GNOME | Laga soo bilaabo Linux
Maanta, sidii loo sii wadi lahaa wax ku biirinta faafitaanka iyo isugeynta oo ka mid ah mashaariicda waxtarka leh ee aan la soo koobi karin ee Software Bilaash ah, Isha Furan iyo GNU / Linux jira, waxaan ka hadli doonaa mid la yiraahdo «GOOBTA GNOME».
Kee, asal ahaan, waa mashruuc xiiso leh oo qiimo leh oo ay abuureen isla markaana loogu talagalay Beesha "GNOME", si loo ballaariyo kanaga nidaamka deegaanka ee codsiyada iyo maktabadaha, oo leh horumar dhinac saddexaad ah.
Barnaamijyada bilaashka ah ee Bilaashka ah iyo barnaamijyada furan ee loogu talagalay bay'adaha xirfadeed
Kuwa iyagu, sida caadada u ah raba inay sahamiyaan oo ay ballaariyaan aqoontooda wax badan mashruucyo lacag la'aan ah oo furan, waxtar u leh qof walbana heli karo, waxaan kugula talineynaa daabacaadan soo socota:
"Isticmaalka Nidaamyada Hawlgal ee bilaashka ah iyo kuwa furan, sida GNU / Linux, oo ay weheliso bayaankeeda ballaadhan, sii kordhaya, wax ku oolka ah ee wax ku oolka ah ee codsiyada bilaashka ah iyo kuwa furan, bilaash ama aan ahayn, waxay ka dhigayaan mid ka mid ah Distros iyo Apps la heli karo mid aad u fiican, la heli karo oo wax ku ool ah. Xalka IT-ga ee shaqsiyadeed iyo shaqooyinka xirfadeed, taas oo ah, ka shaqeynta guriga iyo xafiiska." Barnaamijyada Bilaashka ah ee Bilaashka ah iyo barnaamijyada furan ee furan si ay uga shaqeeyaan Linux
Barnaamijyada Bilaashka ah ee Bilaashka ah iyo barnaamijyada furan ee furan si ay uga shaqeeyaan Linux
1 GNOME CIRCLE: Ballaadhinta nidaamka deegaanka ee 'GNOME Ecosystem'
1.1 Waa maxay GNOME CIRCLE?
1.2 Maxay yihiin faa'iidooyinka GNOME CIRCLE ee hormarinta App-ka GNOME?
1.3 Maxaad ugu baahan tahay horumariye ahaan inaad ku dalbato GNOME CIRCLE?
1.4 Codsiyada lagu dhex daray GNOME CIRCLE illaa iyo hadda
GNOME CIRCLE: Ballaadhinta nidaamka deegaanka ee 'GNOME Ecosystem'
Waa maxay GNOME CIRCLE?
Sida laga soo xigtay degel rasmi ah tan Mashruuca ay soo saareen oo loogu talagay Bulshada GNOME, waxaa lagu qeexay:
"Mashruuc doonaya inuu hagaajiyo horumarka iyo koritaanka codsiyada iyo maktabadaha si loo ballaariyo nidaamka deegaanka ee GNOME Desktop. Sidaa awgeed, GNOME CIRCLE wuxuu u taagan yahay softiweer wanaagsan oo la soo saaray oo loo heli karo barnaamijka 'GNOME platform'. Kaliya maahan codsiyada ugu fiican iyo maktabadaha GNOME, laakiin sidoo kale waxay raadineysaa inay taageerto horumariyayaal madaxbannaan oo isticmaalaya tiknoolajiyada GNOME."
Maxay yihiin faa'iidooyinka GNOME CIRCLE ee hormarinta App-ka GNOME?
Maamulayaasha mashruucan waxay sheegaan:
"Kuwa horumariya ee adeegsanaya barnaamijka GNOME waxay codsan karaan in mashaariicdooda lagu daro Wareegga GNOME."
Iyo sidaas darteed, haddii mashruucaaga la oggolaado, xaq u leedahay dheefaha qaarkood, kuwaas oo ka mid ah kuwa soo socda lagu xusi karo:
Dallacsiinta iyo xayeysiinta.
Ku darista ikhtiyaariga ah ee kooxda 'Circle's GitLab group'
Xaq u lahaanshaha xubinnimada GNOME Foundation.
Iyo tan dambe, faa'iidooyin badan ayaa la soo saaraa sida:
U codee doorashooyinka Golaha Maamulka iyo aftida.
U soojeedin ahaan musharaxnimo doorashooyinka Golaha Maamulka.
Adeegso cinwaan e-mayl «@gnome.org», blog lagu marti galiyay «https://blogs.gnome.org», iyo meel websaydh ah «https://people.gnome.org».
Kaqeyb gal webka Meeraha GNOME.
Hesho kafaala qaad iyo lacag celinta safarada, shirarka iyo hackfest.
Xisaab ku hayso adeegga «GNOME Cloud» iyo «meet.gnome.org».
Ka dalbo qiimo dhimista E-Rate ee GANDI: domain iyo adeeg bixiye.
Maxaad ugu baahan tahay horumariye ahaan inaad ku dalbato GNOME CIRCLE?
Maamulayaasha mashruuca «GNOME CIRCLE» Sharax in, si loogu qalmo mashruuca, horumariyayaashu waa inay guud ahaan:
Hayso heer tayo guud oo wanaagsan horumarkooda.
Adeegso rukhsad la oggolaaday OSI.
Ma lihid heshiis shati wadaag (CLA).
Ku saabsan codsiyada gaar ahaan, weydii inay u hoggaansamaan waxyaabaha soo socda:
Isticmaal barnaamijka 'GNOME platform', oo ay ku jiraan GTK.
Waxaa loo heli karaa in lagu rakibo Flatpak.
Waxay si fiican ula falgalaan GNOME Desktop, oo ay ku jiraan mid leh astaan ​​codsi oo la yimaado sharaxaad iyo shaashado ka muuqda barnaamijka softiweerka.
Hayso interface isticmaale si fiican loo qaabeeyey oo guud ahaan raacda heshiisyada GNOME.
Ku saabsan maktabadaha gaar ahaan, weydii inay u hoggaansamaan waxyaabaha soo socda:
Kordhi astaamaha barnaamijyada 'GNOME' iyo bartilmaameedka barnaamijyada ku saleysan glib.
Raac tilmaamaha summada GNOME.
Waxay isticmaali karaan ugu yaraan hal mashruuc ama codsi kale.
Fadlan keen dukumeentiyo (uguyaraan dukumiintiyada tixraaca API).
Codsiyada lagu dhex daray GNOME CIRCLE illaa iyo hadda
Ilaa hada waa la tirin karaa 29 codsi iyo 4 maktabado, bogga internetka ee «GNOME CIRCLE», kuwaas oo ka mid ah kuwa soo socda ayaa la iftiimin karaa:
Soo koobid (app)
Mowjad gaaban (app)
Waxaan rajeyneynaa tan "waxtar yar post" ku saabsan «GNOME CIRCLE», mashruuc xiiso leh oo qiimo leh oo ay abuureen iyo kuwa Beesha "GNOME", si loo ballaariyo kanaga nidaamka deegaanka ee codsiyada iyo maktabadaha, oo leh horumar dhinac saddexaad ah; waa mid aad u danayn iyo faa iidooyin leh, dhamaanteed «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» iyo wax ku biirinta baahinta ee nidaamka deegaanka ee cajiibka ah, weyn iyo sii kordhaya ee «GNU/Linux».
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Noticias » GNOME CIRCLE: Codsiyada iyo Maktabadaha Mashruuca GNOME